Bafundi abathandekayo, kunekhulu lezifundo zaseJalimane esizeni sethu. Phezu kwezicelo zakho, siqoqe lezi zifundo zabafundi bamabanga aphansi naphakeme futhi sazihlukanisa ngezigaba. Sihlukanise izifundo zethu zaseJalimane, ezilungiselelwe ngokuhambisana nohlelo lwezifundo lukazwelonke olusetshenziswe ezweni lethu, zabafundi bebanga le-10 sazibala ngezansi.
Ngezansi kunohlu lwezifundo zethu zaseJalimane ezikhonjiswe kubafundi bebanga lesi-10 ezweni lethu lonke. Uhlu lwamayunithi aseJalimane olungezansi luhleleke kusuka kokulula kuya kokunzima. Kodwa-ke, ukuhleleka kwezihloko kungahluka kwezinye izincwadi zokufunda zaseJalimane nakwezinye izincwadi ezengeziwe.
izikhundla eziboniswe ngokujwayelekile ebangeni leshumi le-turkey zifaka phakathi, kepha kungenzeka zingacubunguli amanye amayunithi ngokuya ngokuthanda kothisha waseJalimane, noma zingangezwa ngokuqhubekayo njengamayunithi ahlukanisiwe acutshungulwa, amanye amayunithi angavunyelwa, isb.Ikilasi eli-10 ukuya ekilasini elilandelayo noma amayunithi amaningana angasetshenziswa ngenkathi isigaba se-11. Kodwa-ke, izihloko ezihlanganiswe ebangeni le-9 lezifundo zaseJalimane ngokujwayelekile zimi kanje.
Izifundo ze-10 zeBanga lesiJalimane
Izabizwana Zomuntu waseJalimane
Ukuhlanganiswa kwesiGerman Gehen Verb
Izabizwana Zokucwaninga ZaseJalimane
Isilulumagama Sokuthenga saseJalimane nemisho yokuthenga
Bafundi abathandekayo, izihloko ezihlanganiswe ebangeni le-10 lezifundo zaseJalimane ngokuvamile zingenhla. Sonke sinifisela impumelelo.
# Izifundo ze-10 zeBanga lesiJalimane
Tags: 10. izifundo zesiGerman, 10. inkulumo yesi-German yesifundo, I-10 yesiJalimane. inkulumo yesifundo sekilasi